Ukungena kwe-Echo e-Amazon kungama- $ 9,99 kuphela, okusha okusha - BGR - Teches RELAY
UJimmy G, u-Erin Andrews ku- "Uzizwa emnandi, ngane" - abantu
Lwa isikhathi sentela ngokuncishiswa okungama- $ 35 ku-TurboTax ...
UCharlize Theron, uSophie Turner… Amabhande akuyo yonke indawo…
Ufuna ukuvula noma isiphi isipika ekhaya lakho - olunentambo noma ngaphandle kwentambo - sibe yisipika esihlakaniphile ngokusekelwa kwehendi ye-Alexa? Namuhla nakanjani usuku lokukwenza ngoba i-Amazon ithengisa i-Echo Engenayo Idivayisi yokufaka ku- $ 35 ngerekhodi elingaphansi kwe- $ 9,99 kuphela. Lesi sivumelwano saqhamuka ndawo futhi asazi ukuthi sizotholakala isikhathi esingakanani, ngakho-ke sebenzisa ithuba manje ngaphambi kokuthi intengo inyuke. Ukuguqula noma yisiphi isikhulumi endlini yakho kube yisipika se-Alexa esingenazandla kulula njengokuxhuma ku-Echo Input!
Nawa amaphuzu wekhasi lomkhiqizo:
Ukufakwa kwe-Echo kunezela i-Alexa kusipika sangaphandle futhi kuxhuma nge-3,5 mm noma ikhebula lomsindo le-Bluetooth.
Ukuzwa ngakolunye uhlangothi lwegumbi, noma umculo udlala nini. Ukufakwa kwe-Echo kwaklanyelwe futhi ngasese. Ungacindezela imakrofoni off inkinobho ukuze unqamule imakrofoni nge-elektroniki.
Umsakazo we-Broadcast Amazon, Apple Music, Spotify, Pandora, SiriusXM nokuningi kusipika sakho osithandayo.
Vele ubuze u-Alexa ukuthi adlale ingoma, afunde izindaba noma ahlole isimo sezulu kanye nokuhamba kwabantu.
Setha ama-alamu nezilinganiso zesikhathi, engeza izinto ohlwini lwakho lomsebenzi, bese ulawula amadivayisi wekhaya ahambisanayo.
Ucingo nokuxhuma nge-Bluetooth okwamanje akusekelwa.
I-Alexa ihlale inobuhlakani futhi ingeza amakhono amasha anjengokulandela ngokuqina komzimba, ukudlala imidlalo, nokuningi.
Idizayini elula futhi eqondayo ifanela cishe noma kuphi.
Landela @Businesseals ku-Twitter ukuhambisana nezivumelwano zakamuva nezinkulu esizithola kuwebhu. Amanani angashintsha ngaphandle kwesaziso futhi amakhuphoni ashiwo ngenhla angatholakala ngenani elilinganiselwe. I-BGR ingathola ikhomishini ngama-oda afakwe ngale nto.
TELES RELAY 11869 izikhala 0 amazwana
U-Iris Mittenaere: lokhu kudubula okuhlekisa kakhulu nesithandwa sakhe u-Diego El Glaoui
Lwa isikhathi sentela ngama- $ 35 off TurboTax Premiere 2019 ku-…
UCharlize Theron, uSophie Turner… Amabhande akuyo yonke indawo kukhaphethi obomvu
Isilo se-Prince Harry: kanjani uDuke & # 039; alahle amazwi afudumele kaNdlovukazi…
Umthengisi wemishini waseChinese uHuawei wethula okokuqala ngqa…
Amaqhinga kaCristiano Ronaldo amahle kakhulu wamaqhinga ngo-10…
I-India: I-bandh eholwa yi-RJD ngokumelene ne-CAA paralyzes Bihar, 1…
ENdiya: Ikholisa PM ukuyixazulula le nkinga yamanje: amasekela ayi-12 avela…
Teri Hatcher, yenza izinguquko ezikukhuthazayo -…
I-NSIA imemezela ukusayinwa kwesivumelwano sezimali ne-Ejensi…
Izinkinga zokuvuselela i-iPhone iOS 13 - VIDEO
Kungani Baby Yoda bobabili benza futhi amanxiwa "The Mandalorian"
EMauritania: Ababaleki baseGambian abacishe babe ngama-200 bahlukane…